IXiaomi 11T ngoku iyafumaneka ngesibonelelo sokwazisa kwiAliexpress | I-Androidsis
IXiaomi 11T ngoku iyafumaneka ngesibonelelo sokwazisa kwiAliexpress
U-Emilio Garcia | | Izixhobo ze-Android, Xiaomi
Emva kokuyinqwenela kakhulu, uXiaomi usungule iselfowuni yakhe entsha Xiaomi 11T, kwi Aliexpress. Kwaye khange ayenze ngendlela eqhelekileyo, kodwa ukhatshwa lolu phehlelelo izibonelelo ezizodwa ekufuneka uzisebenzisile.
Ingaba unomdla? Ungayithenga iXiaomi 11T ngesibonelelo sokwazisa esisuka kwiAliexpress, haciendo cofa apha.
1 Ukucaciswa kweXiaomi 11T
1.1 Ikhamera eyi-108 yeengcali
1.2 Umboniso we-120Hz AMOLED AdaptiveSync
1.3 I-Flagship MediaTek Dimension 1200-Ultra processor
1.4 Ibhetri eyi-100% ihlawulwe kwimizuzu engama-36 kuphela
2 Ungasifumana njani isaphulelo se- € 25 kwiXiaomi 11T
Ukucaciswa kweXiaomi 11T
Esi sixhobo sitsha sikhatshwa ziimpawu ezizodwa kwaye sinokushwankathela oku kulandelayo:
Ikhamera eyi-108 yeengcali
Ukuba imo yekhamera isilele kuwe, ngale mobile uya kuba nayo zizonke iziphumo zevidiyo ezi-5, efana nefuthe elibangelwa ziimovie, kwaye onokuthi ube nakho ukuyila njengoko ufuna ngemisebenzi yakho yeevidiyo.
Ngakolunye uhlangothi, Iilensi zeTelemacro ziya kukunceda ubone umhlaba kumncinci. Inqanaba leenkcukacha liza kukushiya ungathethi, kwaye ayisiyonto incinci, kuba ikhamera ephathekayo kunqabile ukuba ikwazi ukubamba izinto ezincinci njengokubumba kumgama omncinci.
Kule nto siyongeza Iilensi ezingama-120º ze-engile ebanzi. Enkosi kubo, awuzukuba naxhala lokuphosa ifowuni yakho ukuze ubambe yonke into: unokurekhoda phantse yonke into ephambi kwakho, ngaphandle kwemida. Nokuba iimeko zokukhanya ziphantsi!
Umboniso we-120Hz AMOLED AdaptiveSync
Ukuba eyona nto uyithandayo isuka kwenye iapp iye kwenye kwaye ichithe umxholo wakho ngendlela enamanzi, uya kulithanda eli nqaku, kwaye inqanaba lokuhlaziya Elinye lawona manqanaba aphezulu kwintengiso: 120 Hz.
Uya kuqaphela ubumanzi ngeminwe yakho. Uya kuskrolela ngendlela egudileyo.
I-Flagship MediaTek Dimension 1200-Ultra processor
Ayisiyiyo kuphela into enkulu Iprosesa ye-6nm ene-5G ezimbini, ukuya kuthi ga kwi-3,0GHz, Ikwaxhasa itekhnoloji ye5G. Le modem eyakhelweyo iqinisekisa ukuba isixhobo siyazenzela ngokuzenzekelayo ukuze sisebenzise amandla amancinci.
Ibhetri eyi-100% ihlawulwe kwimizuzu engama-36 kuphela
Ngokubhekisele kwibhetri, sinesikhundla se-500 mAh, esongezwe kwityala le-turbo le-67 W.
Ezi datha zimangalisayo zisishiya sinedatha elungileyo, kwaye yiyo loo nto Siza kukwazi ukutshaja ibhetri ehambayo kwi-100% kwimizuzu nje engama-36. Oku kunokwenzeka ngenxa yento yayo ye-nano oxide anode, ekwaziyo ukugcina i-lithium ions ephindwe kalishumi kunegrafite eqhelekileyo.
Kwaye ngokungathi ayonelanga, Iscreen esingu-6,67 will asiyi kukushiya ungakhathali. Ibhetri enkulu, yeselfowuni enkulu nenomtsalane. Ngale ndlela sinokonwabela uthotho kunye neemovie esizithanda kakhulu, ngaphandle kokukhangela kwiscreen esincinci kwaye ngaphandle koloyiko lokuphelelwa yibhetri kuhambo apho singayiphathi khona itshaja ngesandla.
Ungasifumana njani isaphulelo se- € 25 kwiXiaomi 11T
Njengoko besitshilo ekuqaleni, esi sixhobo sele sifumaneka kwihlabathi liphela kwiAliexpress. Ukongeza, kumsitho wokuphehlelelwa kwayo, unokuhlawulela Ikhuphoni lesaphulelo ayizukusithoba nto ngaphezulu kwaye akukho nto incinci, leyo € 25 yexabiso elipheleleyo.
Oku kuthetha ukuba iinguqulelo zezixhobo zihlala kula maxabiso alandelayo:
Xiaomi 11T 8 + 128GB: 507 € 432 €
Xiaomi 11T 8 + 256GB: 549 474 €
Ikhuphoni oza kulisebenzisa ngu-09ESOW25 kwaye unokulihlangula ngokufanelekileyo ngalo lonke ixesha lokunyuselwa haciendo cofa apha.
Kwaye uza kuthenga eyiphi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » IXiaomi 11T ngoku iyafumaneka ngesibonelelo sokwazisa kwiAliexpress
I-Aliexpress ibeka i-XIAOMI Pad 5 ekudala ilindelwe ukuba ithengiswe
INkosi yeeRingi: Vumela idabi liqale, ngoku liyafumaneka kwiVenkile yokudlala